လောင်းလုံးတွင် ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး အကသ ကျောင်းသားများ ချီတက် ဆန္ဒပြ
မုံရွာတွင် လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်အင်အားစုများ ဦးဆောင်ကာ အကြမ်းဖက် စစ်တပ် သွေးစွန်းငွေ ဖြတ်တောက်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြ
မြိုင်မြို့နယ်၊ မင်းတန်းရွာကို စစ်တပ်က ရွာလုံးကျွတ် မီးတင်ရှို့နေပြီး ပြည်သူ ၃၀ ကျော် ပိတ်မိနေ၊ ချောင်းဦး တပါယ်အင်းရွာတွင် စစ်တပ်၏ မီးရှို့မှုကြောင့် နေအိမ် ၉ လုံး ပြာကျ
သေ့ဘောဘိုးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား ၆ ဦးကို အရှင်ဖမ်းမိပြီး ၁၂၀ မမ စိန်ပြောင်းအပါအဝင် လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြား သိမ်းဆည်းရမိ
Yangon Khit Thit Media - May 19, 2022
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၉ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ် သေ့ဘောဘိုးကျေးရွာအနီးရှိ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ ရှေ့တန်းစခန်းကုန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က ယမန်နေ့ မေလ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် စစ်သား ၆ ဦးကို အရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီး လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြား သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း ကရင်သတင်းရင်းမြစ်များထံမှ သိရှိရသည်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင် MA အမျိုးအစား သေနတ် ၆ လက်၊ စက်လက်...
Yangon Khit Thit Media - May 21, 2022
တရုတ်ဝမ်ပေါင်နှင့် စစ်တပ်ဦးပိုင် ဖက်စပ် လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း မပြုရန် PDFတပ်ပေါင်းစုက ထပ်မံ သတိ ပေး၊ စီမံကိန်း အနီး စျေးဆိုင်များ မထွက်ရန်လည်း တားမြစ်
ယူကရိန်းအရေးကြောင့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီဘက် ယိမ်းယိုင်လာသောတရုတ်
Yangon Khit Thit Media -
အကြမ်းဖက် အာဏာလု စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှ စတင်ပြီး လူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်ရန် အတွက် နှိပ်ပါ
ရုရှားကို ခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်လျက်ရှိသော ယူကရိန်းလူထု၏ စုဖွဲ့မှု နမူနာကောင်းများက မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်လာနေ
မန္တလေးတွင် “ကျွန်ယန္တယား မလည်ပတ်ဖို့ ကျွန်ပညာရေးကို ဆန့်ကျင်စို့” စာရွက်များကြဲကာ စစ်ကျွန်ပညာရေး ဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးရှေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်၏ ပြောကြားချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ
ယင်းမာပင်တွင် ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး ရွှေရေကြည် သပိတ် စစ်ကြောင်း ချီတက် ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၁လောင်းလုံးမြို့နယ် လုံးဆိုင်ရာ အခြေခံပညာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှ ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အခြေခံပညာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂတည်ထောင်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်အကြိုအဖြင့် ဖက်ဆစ် စစ်တပ် တော်လှန်ရေး ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၁မကွေးတိုင်း ထီးလင်းမြို့နယ် ရေမျက်နီရွာအနီး ယောဒေသ တော်လှန်ရေး တပ်ပေါင်းစု YRPA တပ်ဖွဲ့နှင့် အကြမ်းဖက် စစ်တပ်တို့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်သား ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။...
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၁စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ရှိ အင်တိုင်းလေးကျေးရွာကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က ယမန်နေ့ မေလ ၂၀ ရက် နေ့လယ်တွင် ဝင်ရောက်ပြီး မီးတင်ရှို့မှုကြောင့် နေအိမ် ၇၀ လုံးခန့် မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။ယမန်နေ့တွင် စစ်ကောင်စီတပ်များ အင်တိုင်းလေးကျေးရွာအတွင်းသို့ ပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာစဉ် လက်နက်ကြီး ထိမှန်ပြီး...
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၁မုံရွာတွင် လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသ သပိတ်အင်အားစု ပြည်သူများ ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် " Total Energies Chevron - The junta kills with your money ! "...
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၁မကွေးတိုင်း မြိုင်မြို့နယ် မင်းတန်းရွာ အကြမ်းဖက် စစ်တပ်က ယနေ့ မေလ ၂၁ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင် ရွာလုံးကျွတ် မီးတင် ရှို့နေကြောင်း ဒေသခံ ပြည်သူများက ရန်ကုန် ခေတ်သစ် မီဒီယာသို့...
ပြည်သူကို MIG -29 ဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေသော စစ်လေယာဉ်မောင်း ၁၅ ဦး၏ လိပ်စာနှင့် အမည်စာရင်းများ
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ပြည်သူများကို ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေသော Yak-130 တိုက်လေယာဉ် ၁၈ စီးကို မောင်းနှင်သော ပိုင်းလော့ ၁၈ ဦး၏ နာမည်နှင့်လိပ်စာများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မနာလိုမှု ၊ အငုံ့စိတ်များဖြင့် အရာရာတိုင်း သူသိ၊သူတတ် မင်းအောင်လှိုင် စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တော့၊ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ လျှို့ဝှက် အစည်းအဝေး မှတ် တမ်း နေပြည်တော်စစ်ဘက်က ပေးပို့လာ
More from Investigative News
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၆ ဦးသေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၄ ဦးသေဆုံး
More from Number Focus
Yangon Khit Thit Media YouTube
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၂၁ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၂၁ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၂၁ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၂၀ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၂၀ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၂၀ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၉ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၉ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၉ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၈ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၈ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၈ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၇ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၇ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၆ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၆ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၆ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန မေ ၁၅ ရက်နေ့ ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၄ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၄ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၄ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
မာဝီ (ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်-KNDF -အတွင်းရေးမှူး -၂ ) နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၃ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၃ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၃ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၂ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၂ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၂ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၁ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၁ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၁ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
စစ်တပ်ကို Total က ပေးမယ့် ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ က ပြည်သူတွေ သတ်မယ့် စစ်လက်နက်တွေ ဘယ်လောက်ဝယ်နိုင်မလဲ
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၀ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၀ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၁၀ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
ကရင်နီပြည်နယ်တွင် စစ်တပ်၏ လူသတ် ပစ္စည်းခိုး မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုများ
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၉ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၉ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၉ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန မေ ၈ ရက်နေ့ ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန် နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း(၃)
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၇ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၇ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၇ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၆ ရက် ညနေပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အပိုင်း ၂
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၆ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
Khit Thit သတင်းဌာန၏ မေ ၆ ရက် မနက်ပိုင်း ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အပိုင်း ၁
မင်းအောင်လှိုင်ဘက်လိုက်တဲ့ ဟွန်ဆင်ကို အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ ဆန့် ကျင်၊ အာဆီယံအစည်းအဝေး ခြွင်းချက်နဲ့ ဟွန်ဆင် ဖိတ်ပေမယ့် အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေက မင်းအောင်လှိုင်ကို ဖယ် ထားရေးမူအပေါ်တွင်သာ ရပ်တည်
ဆုပ်လည်းစူး စားလည်းရူးတော့မည့် စစ်ကောင်စီ
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် ဇွန်ဘီ(Zombie)နှင့် တူလာသည့် မင်းအောင်လှိုင်
By ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ဒီကနေ့ မေ ၂၁ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့-ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့မှာ မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဦးမြစန်း၊ ဓါတ်မှန်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အေးခိုင်ဦး အပါအဝင် CDM ဆရာဝန် ၃ ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်က အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ ဒေသ သတင်းရင်းမြစ်တွေဆီကနေ သိရပါတယ်။-...
By ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ဒီကနေ့ မေ ၂၁ ရက် မနက်ပိုင်း ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့-စစ်ကိုင်းတိုင်း တန့်ဆည်နဲ့ခင်ဦးဘက်ကရွာတွေကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က မနေ့ကမီးတင်ရှို့လို့ ဒေသခံ ပြည်သူတွေ ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။- ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ဖြစ်တာထက်ဆိုးတဲ့ ပြည်သူတွေ ငတ်ပြတ်အောင် စစ်တပ်က လုပ်နေတာဟာ ပိုပြီး ခံရခက်စေတယ်လို့ AA ရဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ...
Yangon Khit Thit Media - May 20, 2022
By ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ဒီကနေ့ မေ ၂၀ ရက် ညနေပိုင်း ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့-ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့နယ်မှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က စစ်ကောင်စီရဲ့ သေ့ဘောဘိုးစခန်းကို တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန် ခလရ ၃၂ က ဒု-တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူး အောင်ငြိမ်းချမ်း နဲ့ ဗိုလ် ဟန်ဝင်းထွန်းဆိုသူတို့ဟာ...
By ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ဒီကနေ့ မေ ၂၀ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့- အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ ဆက်ဆံနေပြီး အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကို မျောက်ပြ ဆန်တောင်းသူ ထက် အဆင်မြင့်တဲ့ မျောက်လည် ရောင်းသူဆိုပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ပြောခွင့်ရ...
By ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ဒီကနေ့ မေ ၂၀ ရက် မနက်ပိုင်း ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့-မကွေးတိုင်း၊ ကျောက်ထုမြို့မှာ စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေ ဧပြီလကစလို့ လစာမရတော့ဘူးလို့ ဝန်ထမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းဆီက သိရပါတယ်။-ရခိုင်မှာ ပြဿနာဖြစ်လာရင် "စစ်တပ်ကို အဆိုးမဆိုနဲ့" လို့ AA ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က တုံ့ပြန်ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။...
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ၏ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ခိုင်သုခနှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
© Yangon Khit Thit Media. All rights reserved.